कोरोना भाइरसलाई नजरअन्दाज गर्दै ट्रम्पले अस्पताल छाडे
स्थिर सरकारका लागि मेरो पक्षमा मतदान गर्नस् : शाही
चुँडाल र सुवेदी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश अनुमोदन
नेपाल पक्षका सांसदले भने– फ्लोर क्रसको हल्ला चलाउँदा चोट पुग्यो
आत्महत्या गर्न नदीमा हामफालेका बिन गुरुङलाई मलामीले बचाए
‘नेपालीको रहर स्मार्ट सहर’, आगामी वर्ष १२ वटा स्मार्ट सहर बनाइने
गभर्नरले क्यूआर कोडबाट भेटी चढाएर सुरु गरे वागेश्वरी मन्दिरमा माछापुच्छ्रे बैंकको क्युआर कोड सेवा सुरु
नेपालको मल्टि ब्राण्डेड जुत्ता सोरुम सञ्चालनमा
सांसद गोकुल बास्कोटालाई लेखा समिति सदस्यबाट फिर्ता गर्न ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको माग
ओलीको गृह जिल्लामा खनाल–नेपाल समूहले समानान्तर कमिटी घोषणा गर्दै
त्रिकोणात्मक सिरिजको ट्रफी सार्वजनिक
विदेश प्रतिक्रिया दिनुहोस्
बाह्रखरी - मंगलबार, असोज २०, २०७७
बीबीसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएपछि उपचाररत् अवस्थामा रहेकै बेला नाटकीय रुपमा ह्‍वाइटहाउस फर्किएका छन् । यति मात्र नभएर उनले ह्‍वाइटहाउस पुग्‍नासाथै बाल्कोनीमा फोटो खिचाउनका लागि मास्क खोलेर सबैलाई हात हल्लाएर अभिवादन गरेका छन् । जहाँबाट उनले सबैलाई अभिवादन गरे यतिखेर त्यहाँका थुप्रै कर्मचारी कोरोना पोजेटिभ भेटिएका छन् ।
यसअघि ट्रम्पले आफ्नो ट्‌विटमा ‘एकदमै राम्रो महसुस भइरहेको छ, कोभिडसँग कोही नडराऔँ, यसलाई हाम्रो जीवनमाथि हाबी हुन नदिऔँ’ भनेर लेखेका थिए । जबकि अमेरिकामा यतिबेला ७४ लाख कोभिडबाट संक्रमित छन् भने २ लाख १० हजाररको मृत्यु भइसकेको छ । यस्तोमा ट्रम्पले महामारीलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिइरहेका छन् भन्‍ने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । किनकि संक्रमित भएदेखि उनले थुप्रैपटक विवादास्पद बयान दिइरहेका छन् ।
साथै उनले अब केही समयमै चुनाव प्रचार अभियानमा फर्किने भनेर पनि ट्‍विट गरिसकेका छन् । ह्‍वाइटहाउसमा कसरी भाइरस यस्तो तीव्र रुपमा फैलियो भन्‍ने सञ्‍चारकर्मीहरुको प्रश्नलाई बेवास्ता गर्दै उनले सबैमाझ धन्यवादको अभिवादन गरेका हुन् ।
त्यस्तै ह्‍वाइटहाउसमा फर्किनासाथ उनले अर्को एउटा भिडियो पनि पोस्ट गरेर सबै अमेरिकीहरुलाई काममा फर्किन आग्रह गरेका हुन् । त्यसमा उनले भनेका छन्, “तपाईंहरुले पक्कै पनि यसलाई हराउनुहुनेछ । किनकि हामीसँग विश्वकै सबैभन्दा राम्रा मेडिकल उपकरणहरु छन् र अत्यन्तै प्रभावकारी औषधिहरु छन् जुन भर्खरै मात्र विकसित भएका हुन् ।” यति मात्र नभइ उनले आफू भाइरसबाट इम्युन भएको हुन सक्ने आधारविहीन दाबी पनि गरेका छन् । त्यस्तै खोपबारे उनले छिटै आउँछ भन्‍ने सन्देश दिएका हुन् । जबकि अमेरिकी रोग नियन्त्रण केन्द्रले, पर्याप्त रुपमा सबैतिर खोप उपलब्ध हुन अझै आगामी वर्षको मध्यतिरसम्म पर्खिनुपर्ने बताइरहेको छ ।
ह्‍वाइटहाउसका फिजिसियन, डाक्टर सिन कोलेले सोमबार दिउँसो ट्रम्प पूर्ण रुपमा भाइरसबाट उम्किसकेका छैनन् भन्‍ने जानकारी दिएका थिए । तर पनि उनको मेडिकल टिमले उनको अवस्थामा सुधार आइरहेकोबारे भने स्वीकार गरेको छ । उनलाई सुरक्षित रुपमा घर फर्किन पनि सहमति जनाएका हुन् जहाँ उनी चौबीस घण्टा विश्वस्तरीय मेडिकल केयरको रेखदेखमा हुने बताइएको छ ।
त्यस्तै ह्‍वाइटहाउस फर्किनुअगाडि ट्रम्पको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो/होइन भन्ने प्रश्नमा चाहिँ डाक्टर कोन्लेले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । त्यस्तै ट्रम्पको स्क्यान, निमोनियाँसम्बन्धी पनि विस्तृत जानकारी दिइएको छैन ।
फिजिसियन कोन्लेका अनुसार ट्रम्पलाई अझै पनि एन्टिभाइरल ‘रेमडेभिसिभिर’ सँगै ‘स्टेरोइड डेक्सामिथेसोन’ को डोज दिइराखिएको छ । उनलाई डिस्चार्ज अगाडि र ह्‍वाइटहाउस पुगेपछि पाचौंपटक अर्को डोज दिइने तय भएको बताइएको छ । त्यस्तै ट्रम्प अब चुनाव प्रचार अभियानमा भाग लिन सक्छन् भन्ने प्रश्नमा चाहिँ कोन्लेले यसबारे अझै विचार गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
मंगलबार, असोज २०, २०७७ मा प्रकाशित
भारतमा एकैदिन दुई लाख कोरोना संक्रमित थपिए, एक हजार ३८ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । भारतमा एकै दिन दुई लाखभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित फेला परेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो... ९ घण्टा पहिले
विकासशील राष्ट्रका आधा महिला शारीरिक ‘स्वतन्त्रता’ बाट वञ्चित छन् : अध्ययन
अलजजिरा । विकासशील देशहरूमा करिब आधा संख्यामा महिला तथा किशोरीले आफ्नो शरीरसम्बन्धी निर्णय आफैं गर्न नपाएका संयुक्त राष्ट्रसंघको एक अध्ययनले... बिहीबार, वैशाख २, २०७८
रुसमाथि शृंखलाबद्ध प्रतिबन्ध लगाउने तयारीमा अमेरिका
वासिङ्टन । अमेरिकाले रुसमाथि प्रतिबन्धको एक विस्तृत शृंखला जारी गर्ने तयारी गरेको छ । स्थानीय समयानुसार छिटोमा बिहीबार सार्वजनिक गरिने... बिहीबार, वैशाख २, २०७८
अमेरिकामा अश्वेत युवालाई गोली हान्ने प्रहरीमाथि गैरन्यायिक मुद्दा चलाइयो
वासिङ्टन । अमेरिकाको मिनिसोटा राज्यमा अश्वेत युवकमाथि गोली प्रहार गर्ने प्रहरी अधिकारीमाथि गैरन्यायिक हत्याको मुद्दा चलाइएको छ । आरोपीत प्रहरी अधिकारी... बिहीबार, वैशाख २, २०७८
भारतको कुम्भ मेलामा सहभागी झन्डै १३ सयजनामा कोरोना
देहरादुन । भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा जारी कुम्भ मेलामा सहभागी झन्डै १३ सयजनामा कोभिड–१९ संक्रमण पुष्टि भएको छ । हरिद्वार जिल्लामा... बिहीबार, वैशाख २, २०७८
विश्वमै पहिलोपटक जलवायु परिवर्तनको प्रभाव मूल्यांकन गर्न कानुन बनाउँदै न्युजिल्यान्ड
बीबीसी । न्युजिल्यान्डले वित्तीय क्षेत्रलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभाव मूल्यांकन गर्न बाध्य गराउने कानुन ल्याउने भएको छ । सन् २०५०सम्ममा कार्बन... बिहीबार, वैशाख २, २०७८
गण्डकीमा सत्ता टिकाउन रकमी छलछाम
आफ्नै तारिफको पुल बनाउँछन् प्रधानमन्त्री
देउवा–पौडेल सम्बन्ध : शोकसभादेखि मञ्चसम्मै झगडा ! सोमबार, चैत ३०, २०७७
काठमाडौंमा गाँउको स्वाद पस्किरहेका मकैघरहरु आइतबार, चैत २९, २०७७
डँडेलोबाट वायु प्रदूषणमा परेको असर
जानेआउने वर्ष : के नयाँ के पुरानो ?
सर्वोत्तम सिमेन्टका अध्यक्ष न्यौपानेलाई प्रश्न– तपाईंको कम्पनीको सेयर मूल्य ७५० रुपैयाँ किन ?
मंगलबार, चैत ३१, २०७७
‘आईपीओमा १० कित्ते नीतिको उद्देश्य समाप्त भयो, उपयुक्त समयमा रिभ्यु गर्छौँ’ आइतबार, चैत २९, २०७७
एकठाउँबाट अर्कोमा लैजाँदा गैँडालाई किन उल्टो झुन्ड्याइन्छ ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो– १४ जिल्लामा भोलिदेखि स्कुल बन्द नगरे लकडाउन गर्नुपर्ने हुन्छ